फेरि गयो ७ रेक्टरस्केलको शक्तिशाली भूकम्प, ४ जनाको मृत्यु, दर्जनौ घाइते — Sanchar Kendra
१कोरोनाले थला परेको भारतबाट आयो अहिलेसम्मकै खुसीको खबर
२महाकाली नदीमा बाढी- निर्माणाधीन पुलको बाँध बगायो
३बेहुली लिन गएका बेहुलालाई कोरोना देखिएपछि…
४फेरि घट्यो सुनको मूल्य
५प्रेमिकासँग ​पुनर्मिलनपछि दंग ज्याकले किन गर्न सकेनन् गोल ?
६आँपका लागि राखियो तीन सुरक्षाकर्मी, ९ वटा कुकुरले दिन्छन् चौबिसै घण्टा पहरेदारी
७बुढानिलकण्ठमा केन्द्रीय सदस्यहरूसँग छलफल गर्दै देउवा
८नबिल बैंक लिमिटेडको विशेष साधारण सभा सम्पन्न
९बाबुराम भट्टराईको यस्तो एक ट्वीटले सामाजिक सञ्जालमा खैलाबैला, कसलाई के भने त्यस्तो ?
१०असार ९ गतेदेखि दुबई-काठमाडौँ उडान सुरु हुँदै, कति छ टिकट मूल्य ?
११थुनिएको तामाकोशी नदीलाई चिनले यसरी खोलिदिए, के भन्छन दोलखाका डिएसपी ?
१२कहिलेदेखि सुरु हुँदैछ ‘स्मार्ट लकडाउन’ ? अब यी क्षेत्रहरु खोल्न दिइने
१नेपाललाई आगामी साता स्वास्थ्य सामग्री पठाउँछौं- डब्ल्यूएचओ
३आजदेखि थपिएको निषेधाज्ञामा के गर्न पाइन्छ, के पाइदैन ? हेर्नुहोस बिस्तृतमा
४नेपाललाई कोरोना विरुद्धको खोप दिने अमेरिकाकाे घोषणा
५सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना गरेको खण्डमा एमालेले स्वीकार्छ- नेता बोगटी
६काठमाडौँ उपत्यकामा लागु भयो अहिलेसम्मकै यस्तो कडा नियम, जारी भयो सूचना
७जेलबाट छुटेपछि माइला लामासहितका नेताहरुको विप्लवसँग पहिलो भेट, के-के भयो कुराकानी ?
८नेकपा नेतृ आस्थालाई मातृ शोक, विप्लवद्वारा श्रद्धाञ्जली व्यक्त
९काठमाडौँ उपत्यकामा फेरि निषेधाज्ञा लम्ब्याइदै
१०संसद बिघटन र चुनाव घोषणाबारे विप्लवको आधिकारिक धारणा बाहिरियो, हेर्नुहोस विज्ञप्तिसहित
११डेनमार्कले नेपाललाई १४ लाख डोज खोप दिने
१२संसद विघटनबिरुद्धको मुद्धा ‘हेर्दाहेर्दै’मा
फेरि गयो ७ रेक्टरस्केलको शक्तिशाली भूकम्प, ४ जनाको मृत्यु, दर्जनौ घाइते
एजेन्सी । फेरि शक्तिशाली भूकम्प गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार टर्कीको पश्चिमी शहर इजमिरलाई केन्द्र बनाएर गएको भूकम्पको धक्काले कैयौं भवनहरु भत्किएका छन् ।
समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार भूकम्पका कारण अहिलेसम्म ४ जना मानिसको मृत्यु भएको विवरण प्राप्त गरिएको छ । यस्तै, कम्तीमा १ सय २० जना घाइते भएका छन् । भूकम्पका कारण थप मानवीय क्षति भएको हुनसक्ने आकलन गरिएको छ । अमेरिकी जिओलोजिक सर्वेका अनुसार भूकम्पको तीव्रता ७.० रेक्टरस्केल मापन गरिएको छ ।
भूकम्पले ग्रीस र एथेन्स पनि प्रभावित भएका बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । तुर्कीको विपद प्रबन्ध विभागले राहत तथा उद्दारकर्ताहरुलाई प्रभावित क्षेत्रमा पठाइसकिएको जनाएको छ । भूकम्पले प्रभावित इजमिर टर्कीको तेस्रो ठूलो शहर हो ।
यस्तै इन्डोनेशियाको सुलावेसी टापूमा स्थानीय समयअनुसार शुक्रबार बिहान ६ दशमलव २ रेक्टर स्केलको भूकम्प जाँदा कम्तिमा ३४ जनाको मृत्यु भएको छ । भवनहरु भत्कँदा ६ सय जनाभन्दा धेरै घाइते भएको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
यस भूकम्पको केन्द्रविन्द्रू मेजीन शहरको उत्तरपूर्वतर्फ ६ किलोमिटर टाढा रहेको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । भूकम्पपछि कम्तिमा १५ हजार जनाले घर छाडेका छन् । मेजिनको उत्तरतर्फ अस्पताल भवन भत्कदाँ दर्जनौं बिरामी र कर्मचारीहरु भग्नावशेषमै पुरिएका छन् ।
अहिलेसम्म मामुजुमा कम्तिमा २६ जना तथा पश्चिमी सुलावेसीमा कम्तिमा ८ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भइसकेको छ । ‘यो संख्या बढ्न सक्छ । तर नबढोस् भन्ने हाम्रो कामना छ । धेरै मृतकहरुलाई भग्नावेशषमै पुरिदैंछ,’ मामुजु विपद् व्यवस्थापन एजेन्सीका अली रहमानले भने ।
अनलाईनमा पोस्ट गरिएका तस्विर र भिडियोले क्षतिग्रस्त भवन र ध्वस्त संरचनामा पुरिएकाहरुको अवस्था देखाउँछ । भूकम्पका कारण विद्युतको आपूर्ति बन्द भएको तथा पश्चिम सुलावेसीस्थित एक होटल र गर्भनरको कार्यालयमा ठूलो क्षति भएको विपद् व्यवस्थापन एजेन्सीले जनाएको छ ।
यस्तै उता उत्तर कोरियाले संसारकै सबैभन्दा शक्तिशाली अस्त्र सार्वजनिक गरिएको दाबी गरेको छ । पनडुब्बीबाट प्र’हार गरिने एउटा नयाँ प्रकारको बलिस्टिक क्षे’प्या’स्त्र सार्वजनिक गरिएको हो । त्यहाँको सरकारी सञ्चारमाध्यमले त्यसलाई “संसारकै सबैभन्दा शक्तिशाली अ’स्त्र” भनेर वर्णन गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।
सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार प्योङयाङमा सैनिक परेडका क्रममा थुप्रै क्षे’प्यास्त्रहरू प्रदर्शन गरिएको र त्यसलाई सर्वोच्च नेता किम जङ्ग-अनले अवलोकन गरेका थिए। त्यसअघि एउटा विरल राजनीतिक बैठकमा नेता किमले संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तर कोरियाको “प्रधान शत्रु” भएको बताएका थिए।
अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित जो बाइडनको शपथ कार्यक्रमभन्दा केही दिनअघि उत्तर कोरियाले आफ्नो सैनिक सामर्थ्य प्रदर्शन गरेको छ। सैनिक परेड अवलोकन गरेका किमले मुस्कुराउँदै अभिवादन गरिरहेको तस्वीर सार्वजनिक भएको छ।
ठूलो आकारका कालो-सेतो रङ्गका चारवटा क्षे’प्यास्त्र प्रदर्शन गरिएको सरकारी सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गरेका तस्वीरमा देखिन्छ। विश्लेषकहरूले यसअघि उत्तर कोरिया नदेखिएका अस्त्रहरू देखिएको बताएका छन्।
सार्वजनिक गरिएको क्षेप्यास्त्रको कोरियाली नाम उल्लेख गर्दै उत्तर कोरियासम्बन्धी विज्ञ अङ्कित पाण्डाले “नयाँ वर्ष, नयाँ पकगकसङ्ग” भन्दै ट्वीट गरेका छन्। “विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली अ’स्त्र पनडुब्बीबाट प्रहार गरिने बलिस्टिक क्षे’प्यास्त्र क्रा’न्तिकारी स’शस्त्र फौजहरूको शक्ति प्रदर्शन गर्दै एकपछि अर्को गरी स्क्वायरमा प्रवेशमा गरेको छ,” कोरियन सेन्ट्रल न्यूज एजेन्सीले भनेको छ।
यता एक जना सुत्केरी र उनको शिशुको उपचारमा लापरबाही भएको भन्दै आन्दोलन भएपछि राजीनामाको घोषणा गरेका छन् । मंगोलियाका प्रधानमन्त्री खुरेल्सुख उख्नाले पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । उनको राजीनामा बिहीबार बेलुका नै संसदले पारित गरेको छ। संसदमा रहेका ७६ सांसद मध्ये ९५ प्रतिशतले उनको राजीनामाको पक्षमा मतदान गरेका थिए ।
कोरोना भाइरस आफ्नो देशमा भित्रिन नदिन मंगोलियाले गत वर्षदेखि नै नाकाबन्दीलगायत उच्च सतर्कताका उपाय अपनाएको थियो। त्यसबीचमा पनि गत नोभेम्बरमा पहिलो आन्तरिक सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यसपछि फेरि प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरुलाई थप कडा बनाइएको थियो।
कडाइ गर्दा गर्दै पनि एउटा अस्पतालमा नवजात शिशुलाई भर्खरै जन्माएकी महिला र ती शिशुसँग कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमितलाई राखेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि सर्वत्र विरोध भएको थियो। विरोधसँगै आन्दोलन भएपछि गल्ती भएको भन्दै सरकारको तर्फबाट प्रहरी अधिकारीहरुले माफी माग्दा पनि आन्दोलन झन झन् चर्किंदै गएको थियो।
आन्दोलनकारीहरुले सरकारी कार्यालयहरु अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। सरकारी अधिकारीहरुले गम्भीर कमीकमजोरी र लापरबाही गरेको आन्दोलनकारीको आरोप छ। आन्दोलन चर्किँदै गएपछि प्रधानमन्त्री उख्नाले पनि दुःख व्यक्त गर्दै क्षमा याचना गरेका छन्। भने, ‘प्रधानमन्त्री भएकाले यो घटनाको जिम्मेवारी मैले लिन्छु।’
‘दुर्भाग्यवश ती आमा र शिशुलाई व्यवस्थापनमा केही कमजोरी भएकै हो, त्यो दृश्य हृदयविदारक नै छ, त्यसमा सरकारको तर्फबाट गल्ती महसुस गर्दै क्षमा याचना गर्न चाहन्छौँ,’ उनले थपेका छन्। उनीविरुद्ध बुधबार पाँच हजार युवाले राजधानीमा प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरुले प्रदर्शन गरेको ब्यानरमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा पनि मागिएको थियो।
राष्ट्रिय विपद् आयोगको नेतृत्व गर्नु भएका उपप्रधानमन्त्री र विभागीय जिम्मेवारीमा रहेका स्वास्थ्य मन्त्रीले भने प्रत्यक्ष जिम्मेवारी भएकाले आन्दोलनकारीको दबाबकै कारण यसअघि नै राजीनामा दिइसकेका थिए। त्यसैगरी लापर्वाही भएको अस्पतालका प्रमुखलगायत अस्पतालका अन्य जिम्मेवार व्यक्तिहरुले पनि राजीनामा दिएका छन्।
झण्डै एक दशक लामो कम्युनिस्ट नेताहरुको शासनपछि सङ्क्रमणमा फसेको मध्य एसियाली लोकतान्त्रिक मुलुक मंगोलियामा नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि राजनीतिक स्थायित्व हुन सकेको छैन।
यस्तै मेक्सिकोका राष्ट्रपति आन्द्रेस मानुए लोपेज ओब्राडोरलाई कोरोनाभाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । तर उनलाई कोभिड–१९ को सामान्य लक्षण मात्र देखिएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा एक सन्देश दिँदै ६७ वर्षीय राष्ट्रपति ओब्राडोरले भनेका छन्, “म कोभिड–१९ बाट संक्रमित भएको छु । मलाई देखिएका लक्षणहरु सामान्य छन् र मैले औषधि उपचार शुरु गरिसकेको छु ।”
बामपन्थी झुकाव राख्ने राष्ट्रपति ओब्राडोरलाई सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा बिरलै मास्कमा देखिन्छ । उनी महामारीको चरम अवस्थाका दिनहरुमा पनि दिनहुँजसो सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा उपस्थित हुने गरेका छन् । उनी देशका विभिन्न भागमा निरन्तर भ्रमण गरिरहेका छन् भने शुक्रबार पनि उत्तर राज्य सान लुइस पोटोसीको भ्रमण गरेका थिए ।
राष्ट्रपति ओब्राडोरलाई सन् २०१३ मा हृदयाघात भएको थियो भने उनलाई हाइपरटेन्सनको समस्या पनि छ । यस्ता रोगहरु भएका व्यक्तिलाई कोभिड–१९ को संक्रमण खतरनाक मानिन्छ । मेक्सिकोमा गत डिसेम्बर २४ देखि खोप अभियान शुरु भइसकेको छ ।
मेक्सिकोले फाइजरले उत्पादन गरेको खोपका अतिरिक्त अस्ट्राजेनिका र अक्सफोर्डले विकास गरेको खोप पनि प्रयोगमा ल्याउने जनाइसकेको छ । मेक्सिकोमा हालसम्म कोरोना संक्रमित झण्डै एक लाख ५० हजारको मृत्यु भइसकेको छ भने १७ लाख ६३ हजारभन्दा बढी व्यक्ति संक्रमित भएका छन् ।
त्यस्तै अस्ट्रेलियाली औषधि नियामक निकायले फाइजरले विकास गरेको कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोपलाई औपचारिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ । प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले सोमबार फाइजरको खोप स्वीकृत भएको घोषणा गर्दै आगामी फेब्रुअरीको अन्त्यदेखि खोप लगाउन थालिने सम्भावना रहेको बताए ।
अस्ट्रेलियामा कोभिड–१९ विरुद्धको खोपका लागि थेराप्युटिक गुड्स एड्मिनिस्ट्रेसन (टिजिए) बाट अनुमति प्राप्त गर्ने फाइजर पहिलो कम्पनी हो । प्रधानमन्त्री मरिसनले पत्रकारहरुले सोधको प्रश्नको जवाफ दिँदै अस्ट्रेलियाको नियामक निकायले विस्तृत अध्ययन पश्चात फाइजरको खोपलाई स्वीकृति प्रदान गरेको जानकारी दिए ।
उनले यो खोप अस्थायी र आकस्मिक नभई पूर्ण खोपका रुपमा अस्ट्रेलियाले स्वीकार गरेको पनि बताए । अस्ट्रेलियाले यसअघि नै फाइजरसँग एक करोड डोज खोपका लागि फाइजरसँग अनुबन्ध गरिसकेको छ ।
यसबाट करिब ५० लाख मानिसलाई खोप दिन पर्याप्त हुनेछ । कार्यक्रम अनुसार पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी र वृद्धवृद्धालाई खोप दिइने छ । प्रधानमन्त्री मरिसनले आगामी अक्टोबरसम्ममा खोप अभियान पूरा हुने पनि जानकारी दिए ।
भाइरसको प्रकोप देखिनासाथ कडा लकडाउन र सीमाहरु बन्द गरेको अस्ट्रेलियामा तुलनात्मक रुपमा कम संख्यामा मानिस संक्रमित भएका थिए । तैपनि करिब २ करोड ५० लाख जनसंख्या रहेको अस्ट्रेलियामा २९ हजार व्यक्ति संक्रमित भएका छन् । त्यहाँ अहिलेसम्म ९०९ जनाको ज्यान गएको छ ।
अस्ट्रेलियाले अक्सफोर्ड–अस्ट्राजेनिकाले विकास गरेको ५ करोड भन्दा बढी डोज खोपका लागि आदेश दिइसकेको छ । यो खोपको अधिकांश हिस्सा अस्ट्रेलियामै उत्पादन गरिने भए पनि अस्ट्रेलियाको नियामक निकाय टिजिएले त्यसलाई मान्यता दिइसकेको छैन ।
कोरोनाले थला परेको भारतबाट आयो अहिलेसम्मकै खुसीको खबर
बेहुली लिन गएका बेहुलालाई कोरोना देखिएपछि…
आँपका लागि राखियो तीन सुरक्षाकर्मी, ९ वटा कुकुरले दिन्छन् चौबिसै घण्टा पहरेदारी
अरेक्वीपातर्फ जाँदै गरेको बस खोलामा खस्यो, २७ जनाको मृत्यु, थप बिबरणसहित
उत्तर कोरिया अमेरिकासँग वार्ता र संघर्ष दुवैका लागि तयार रहनुपर्छ- किम जोङ उन
रोनाल्डोले पानी पिएपछि कोकाकोलालाई लाग्यो अर्बौ डलरको घाटा
कोरोना भाइरस चीनको ल्याबबाट ‘लिक’ भएको खबर बारिरिएपछि बेलायती प्रधानमन्त्रीले मुख खोले
जी-सेभेन देशले चीनलाई चौतर्फी घेरे, चीनले दियो यस्तो कडा चेतावनी